ओलीले चाहेर पनि किन पाएनन केशव स्थापितले टिकट ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
ओलीले चाहेर पनि किन पाएनन केशव स्थापितले टिकट ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा बाट मेयर पाउनेमा केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, पूर्वमेयर केशव स्थापित र मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानको नाम चर्चामा थियो ।
3545 पटक पढिएको